Momba anay - Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co., Ltd.
Jiangsu Apex Solar Energy Technology Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina ary mpanondrana tontolon'ny masoandro mandritra ny 10 taona mahery. Nahay manokana tamin'ny famolavolana, famokarana ary ny fivarotana sela misy masoandro, modely photovoltaika ary rafi-masoandro isika.
Apex Solar dia manana ekipa R&D sy fitantanana matihanina, manaraka tsara ny fenitra fitsapana iraisam-pirenena an'ny TUV, CE, CEC, CQC, ISO9001, ISO14001. Mandritra izany fotoana izany, Apex Solar dia afaka manolotra famokarana namboarina sy fiantohana vokatra 12 taona ary fiantohana herinaratra 25 taona. Hatramin'izao, ny modules solar apex miaraka amin'ny karazana monocrystalline sy polycrystalline dia napetraka ho an'ny tambajotra an-tambajotra, off grid sy hybrid eo amin'ny tsenan'ireo firenena eropeana, Aostralia, Kanada, Amerika atsimo, Afrika, Moyen Orient ary Azia. Mino izahay fa ny vokatra avo lenta sy ny fandefasana haingana dia mety hitondra fiaraha-miasa maharitra. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no hery manosika antsika handroso hatrany.
Apex Solar dia nanolotra fitaovana famokarana mandeha ho azy hamokatra tontonana azo antoka ho an'ny mpanjifa rehetra, ny orinasa any Vietnam dia manana fahaiza-manao 200MW isan-taona, ny fahaizan'ny famokarana sinoa ny modely PV dia nahatratra 600MW isan-taona, 800MW isan-taona ny fahafahan'ny famokarana. Misy rafitra QC feno mihevitra ny fiandohana hatramin'ny farany. Ny akora ampiasaina rehetra dia avy amin'ny mpamatsy Tier 1, manome vokatra mitovy kalitao amin'ny marika mpamokatra modely masoandro any China miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana kokoa.
Firenena fitsidihana mihoatra ny 50
Ny tontolon'ny masoandro rehetra dia vita amin'ny sela A, ny akora rehetra ampiasaina dia avy amin'ny mpamatsy Tier 1
Mihoatra ny 2GW ny fampiharana fametrahana Modules
Mihoatra ny fahafaha-mandefa 3GW